Home Wararka Gud. Guddiga Hantida Qaranka oo ay Hanti Qaran ku Maqan tahay. Akhriso
Gud. Guddiga Hantida Qaranka oo ay Hanti Qaran ku Maqan tahay. Akhriso
Guddomiyaha guddiga hantida qaaran Xildhibaan, Wasiir, Gudoomiye Cabdullahi Gadax Barre ayaa waxaa soo baxaya caddeymo horaba loogu tuhunsaanaa oo ahaa inuu horay u dhacay hanti ummadeed. Tan oo u muuqata inaan marnaba lagu talagalin in hanti la soo celiyo, waayoo waa waraabe hilbo ku raro.
Barnaamijka Baadi Goob oo la leeyahay waxaa maalgeliyey dad u adeegaya Faarmajo oo uu odayga u duceeyey waxaana qorshuhu yahay oo la rabaa inay ka dhigaan ceeb ka saliim marka ay dorashadu soo dhowaato wax alla wixii eed ahna loo wareejiyo Xasan kheyre iyo kooxdiisa.
Barnaamijkaan waxaa ila iyo hadda lagu beegsadaa dowladdii hore iyo saraakiisheeda, waxaasa hadda ka soo dhex baaxaya in musuq maasuqa dhuleed ee barnaamijka lagu baahiyey ay xubno muhiim ka yihiin ragga ugu awoodda badan dowladdaan sida guddoomiyaha guddiga hantida qaranka Wasiir, xildhibaan Cabdullahi Godax Barre, Xasan Kheyre iyo Beyle.
Magacyada liis la baahiyey waxaa ka muuqda xubno ka tirsanaa dowladdii hore iyo kuwa aad ugu muhiim ah dowladdaan. Liiska waxaa akhrintiisa marka muuqaalka la duubayey laga tagay balsa qoraalka dhex fadhiya oo si cad uga muuqda RW Kheyre, Gaambe, Ugaas Dhageey, Dhagdheer, Xuseen Iidow iyo Xubno badan oo dowladdaan lafdhabar u ah kuna difaaca khaldkeeda gar iyo gardarro.
Dadka sida fiican ula socdaa Siyaasada Somaliya waxay leeyihiin waxaa la soo gaaraay xelligii ay dowladdu noqon lahayd tusabx go’ay oo qof waliba ay raadsan lahayd derbi ay ku gabato. Waxaa dhowaan akhristow arki doontaa tuuggii loo diray tuugada la sheegay inay la dhaceen wixii uu dhacay oo ama ku doodaya waa la iga badsaday oo aniga wax yar ayaa isoo gaaray ama intuu ku biro iska dhex fadhiista, kadibna iska aamusa waa gudoomiye Goodaxe.
Dowladihii is daba joogay ee dalka waxaa laga bartay in khalad kastaa oo ummaada laga gaalaa ay iman doonto maalin lagu xisaabtamo oo wax la iska weydiiyo oo markaas kuwa nool wixii ay mutaan ee la awoodo laga marsiin doono, kua dhintayna ay qiyaamaha keeni doonaan waxa ay ka dhaceen hantida Ilaahay.
Barnaamijka baadi goob oo u muuqda mid diiradda lagu saaray ceebeynta dowladdi hore iyo madaxdeeda oo uu raadkeeda si cad uga muuqdo musuqa la daba joogo waxaa uu bud u dhig u noqon doonaa dhac iyo boob hantiyeed oo ay madaxda dowaladda hadda jirtaa geysteen, waxaana mahaddeeda iska leh MOL oo mar waliba qoreysay wixii ummadda laga dhaco oo ay hubaal u hesho. MW Farmajo iyo Xaaskiisa, RW Kheyre iyo Jufadiisa ayaan iyaga aan dab yar shideyn marka laga hadlayo boobka hantida qaranka waxaana iman doona waqtig ay bannaanka u soo baxaan dhammaan hagardaamooyinka lacageed, maamul, kuwa dhuleed iyo siyaasadeed oo shacbiga u geysteen oo uu ugu xanuunbadan yahay xaraashka shidaalka iyo xaalufka kalluunka.
Guud ahaan dadka Somaliya waxaan u caddeneynaa in dowladdaan ay dhammanteed ka timid dowladdii ka horreysay shakhsi kastaana meel kaga jiray dowladdaas. Haddaba haddii ceebo iyo raad raac lagu sameeyo waxaa la soo helayaa inay ka wada waxbeen rag maanta isu haystaa inay ka nadiif yihiin ceebta loo jeedinayo madaxda aan xilka hadda hayn, balsa la nadiifinayo kuwa xatooyada sii wada sida labada tuug ee ugu daran dowladdaan ee kheyre oo ahaa la taliyihii Xasan sheekh iyo Beyle oo ahaa wasiirkiisii arrimaha dibadda.
Baadi goob oo hal il kaliya wax ka arakyey xelligaan, cabsi ha u geyso ama calooshiis la ciyaarnimo iyo af wax cunay xishoo ha noqotee waxaa uu furay jid qofkasta oo wax qoraa uu mari karo, isagana waxaa looga fadhiyaa inuu soo bandhigo wixii ay lunnsatay Nabad (Nabad la’aan) iyo Nolol (Nolol la’aan) oo mashruciisa maalgelisay haddii kale waxaa uu ka mid noqonayaa tuug qariyey tuugada joogta, kuna tuun tuunsaday eedaha kuwa aan xilka hayn.